Njem Nlegharị Anya Lovelọ na-ahụ n'anya nke ikuku bụ ụlọ obibi nke narị afọ nke 20 setịpụrụ n'etiti ala acres 10 dịdebere obodo Ravadinovo, Mpaghara dị n'etiti obi Strandza. Gaa nụ ma nwee obi ụtọ na nchịkọta ụwa, ụlọ na-ewu ewu na akụkọ ezinụlọ na-akpali akpali. Zuo ike ebe a na-eme ezumike, na-enwe ọmarịcha ọhịa na ọdọ mmiri ma na-enwe mmụọ nke akụkọ ifo.
Mbọsị Ụka 5 Septemba 2021
Njem Nlegharị Anya Lelọ Castle bụ nkeonwe bidoro afọ iri abụọ gara aga na 1996 site na nrọ site na nwata iji wee wuo Castle nke ya, otu a na akụkọ ifo. Onye rụrụ ya bụkwa onye na-ese ụkpụrụ ụlọ, onye na-ewu ya na onye mebere ala ahụ. Isi okwu a bụ imepụta ebe maka ntụrụndụ ezinụlọ, dịka ebe nlegharị anya.
Ngwaahịa Mmụta Uru kachasị mkpa nke ngwaahịa a bụ ịdị mfe nke mmụta na Mmelite ebe nchekwa. Na-enwu ma na-achọta, na-eme Klọdel ọ bụla ka a na-eme ya, a na-emekwa ihe ịma aka a ugboro ugboro. Ọ na-eme ihe oyiyi na-adịgide adịgide n'uche. Inmụta n’ụzọ dị otu a, dị mma ma na-amụ ma na-emeghachi ya, anaghị agwụ ike ma na-eme Oge na-adịgide adịgide karịa. Ọ dị oke mmetụta, mmekọrịta, mfe, dị ọcha, pere mpe na nke ugbu a.
Ụlọ Oriri Na Nkwari Akụ
Fraịdee 3 Septemba 2021
Ụlọ Oriri Na Nkwari Akụ Hotellọ oriri a dị n'ime mgbidi Dai Temple, na ala nke Ugwu Tai. Ebumnuche ndị mmebe ahụ bụ ịgbanwe atụmatụ nke ụlọ oriri na ọ toụ provideụ ahụ iji nye ndị ọbịa ụlọ obibi dị jụụ ma dịkwa mma, n'otu oge ahụ, nye ndị ọbịa ohere ịnweta akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị pụrụ iche nke obodo a. Site n'iji ihe dị mfe, ụda ọkụ, ọkụ dị nro, na ọrụ osise a họọrọ nke ọma, oghere ahụ na-egosi echiche nke ma akụkọ ihe mere eme na nke oge a.
Simulator Maka Forklift Na-Arụ Ọrụ
Tọọzdee 2 Septemba 2021
Simulator Maka Forklift Na-Arụ Ọrụ Onye na-eme simulator maka ọrụ forklift sitere na Sheremetyevo-Cargo bụ igwe pụrụ iche emebere maka ọzụzụ ndị na-anya ndị ọkwọ ụgbọala na nyocha ha ruru eru. Ọ na-anọchi anya ụlọ nwere sistemụ nchịkwa, ọdụ ọdụ na ihuenyo panoramic. Isi ihe eji eme simulator bụ ọla; enwerekwa plastik na ergonomic onlays mere nke polyurethane foam.
Wenezdee 1 Septemba 2021
Ihe Ngosi A na-eme nkọwa ngosipụta nke ihe eji emepụta ihe maka ihe isi ike ọnọdụ City site na Ọktọba, 3 ruo Ọktọba, 5 2019 na Moscow. E gosipụtara echiche dị elu banyere akụkụ ihe siri ike, egwuregwu- na ebe egwuregwu, ihe ọkụ ọkụ na ihe nka obodo n'obodo 15 000 square. Ejiri ezigbo usoro iji hazie mpaghara ebe ngosi ihe, ebe kama ọbụnadị nke ụlọ ntu na-egosipụta ebe a na-ewu ụdị obodo na-arụ ọrụ obere ya na mpaghara niile akọwapụtara, dịka: obodo ukwu, okporo ụzọ, ogige ọha.
Njem Nlegharị Anya Njem Nlegharị Anya Ngwaahịa Mmụta Ụlọ Oriri Na Nkwari Akụ Simulator Maka Forklift Na-Arụ Ọrụ Ihe Ngosi